घरमै बसेर गर्न सकिन्छ बैंकिङ परिक्षा तयारी (महत्वपूर्ण केही टिप्सहरु) ~ Banking Khabar
घरमै बसेर गर्न सकिन्छ बैंकिङ परिक्षा तयारी (महत्वपूर्ण केही टिप्सहरु)
बैंकिङ खबर । बैंकिङ क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा कर्मचारी माग भइरहेको हुन्छ । आवेदन पनि थुप्रै पर्ने गर्छ । तर, छनौटका क्रममा बैंकहरुले आफूले खोजेजस्तो आवेदक नपाएको गुनासो गर्छन् । यता, आवेदकहरु आफू किनछनौट भइएन भन्नेमा अलमल पर्छन् ।
कुनै पनि बैंकमा जागीर खानको लागि लिखित परीक्षाको तयारी गर्दा थुप्रै विषयमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । सरकारी बैंकहरुले भ्याकेन्सी खोलेका छन् भने परीक्षाको तयारीका लागि पाठ्यक्रम पनि उपलब्ध गराएका हुन्छन् । निजी स्तरका बैंकहरुले पनि लिखित परीक्षा मार्फत कर्मचारी छनौट गर्दैछन् भने सोहीअनुरुप तयारी गर्नुपर्छ । पहिलो कुरा त तपाईँ कुन पदको लागि एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो पदमा रहेर तपाईँले पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी केके छन् भन्ने कुरामा नै स्पष्ट हुनुपर्छ । समग्रमा भन्नुपर्दा, बैंकिङ परीक्षाको तयाीगर्दा निम्न कुराहरुमा ध्यान पुर्याउनुपर्दछः
बैंकिङ क्षेत्रको विकासक्रम
बैंकमा जागीर खाने सोँच बनाउने वित्तीकै तपाईँ पहिले नेपालमा बैंकको सुरुवात कहिले र कसरी भयो ? बैंकको सुरुवात हुनुअघि कसरी कारोबार हुन्थ्यो ? बैंकको सुरुवातदेखि हालसम्म केकस्ता परीवर्तनहरु भएका छन् ? लगायतका विषयमा खोजीखोजी अध्ययन गर्नुहोस् ।
नेपालको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गर्छ । यो विषयमा तपाईँ जानकार पक्कै हुनुहुन्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको बारेमा तपाईँलाई अरु केके थाहा छ ? यसको स्थापना, हाल सम्मका गभर्नरहरु, गभर्नर एवम् डेपुटी गभर्नरको निकाय, राष्ट्र बैंकका कार्यहरु, विभागहरु ल्गायतका विषयमा पनि जानकारी लिनुहोस् ।
वेभसाइटबाट हासिल गर्नुहोस् धेरै कुरा : हेर्नुस् नेपाल राष्ट्र बैंकको वेभ
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा द्रुत गतिमा प्रविधिको विस्तार भइरहेको छ । कतिपय प्रविधिहरु त तपाईँ पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ होला । ती प्रविधिहरुका बारेमा तपाईँलाई कत्तिको थाहा छ ? बैंकले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरहरुको बारेमा वा बैंकका ग्राहकहरुका लागि ल्याइएका कार्डहरु, मोबाइल बैंकिङ लगायतका विषयमा पनि अध्ययन गर्नुहोस् ।
बैंक कसरी संचालनहुन्छ ? सर्वसाधारणहरुबाट पैसा लिएपछि व्याज कसरी दिन्छ ? ऋणीहरुलाई ऋण कसरी प्रदान गर्छ ? अन्य केके काम बैंकबाट हुन्छ ?यस्ता सबै जानकारी पनि तपाईँसँग हुनुपर्छ । त्यस्तै, शेयर बजार, बीमा, रेमिट्यान्स लगायतसँग बैंकको सम्बन्ध पनि जान्नुपर्छ ।
बैंकिङ शब्दावलीहरुबारे स्पष्ट जानकारी
हरेक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने शब्दावलीहरु फरक हुन्छन् । त्यस्तै, बैंकिङ क्षेत्रमा प्रयोग हुने थुप्रै शब्दावलीहरु छन्, जुन अन्य क्षेत्रमा प्रयोग हुँदैन । तपाईँ बैंकिङ क्षेत्रमै प्रवेश गर्ने भएपछि यस्ता शब्दावलीहरु खोजीखोजी पढ्नुहोस् ।
विद्यमान बैंकिङ नीति
बैंकिङ क्षेत्र निश्चित ऐन तथा नीति अन्तर्गत रहेर चलेको हुन्छ । हाल कुन ऐन तथा नीति अन्तर्गत रहेर राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गरिरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी प्राप्त गर्नुहोस् ।
चालू मौद्रिक नीति र बजेट
हरेक आर्थिक वर्षमा सरकारले नयाँ बजेट सार्वजनिक गर्छ । सोहीअनुसार, राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति जारी गर्छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसले लिएका लक्ष्यका साथै मौद्रिक नीतिको पनि गहन अध्ययन गर्नुहोस् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकद्धारा जारी चालु आबको मौद्रिक नीति
राष्ट्र बैंकका नीति निर्देशनहरु
बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि राष्ट्र बैंकले समय समयमा निर्देशन जारी गर्ने गर्दछ । कहिले व्याजदर सम्बन्धमा, कहिले मर्जर सन्दर्भमा वा अन्य विषयमा । यस विषयमा जानकारी लिइरहनुपर्दछ । राष्ट्र बैंकले के कस्ता निर्देशन जारी गर्यो र किन भन्ने विषयमा थाहा हुनुपर्दछ ।
देशको वित्तीय क्षेत्रका बारेमा त जान्नुपर्छ नै । साथमा अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय बजारमा केके भइरहेको छ भन्ने कुराको पनि जानकारी लिइरहनुपर्छ । विश्व बैंक, आईएमएफ, एडीबीजस्ता संस्थाको सल्लाह सुझाव लगायत नेपालको बैंकिङ क्षेत्रलाई प्रवाभ पार्न सक्ने हरेक कुराहरुको अध्ययन गर्नुपर्छ ।
एप्लाई गरेको बैंकको बारेमा
तपाईँले एप्लाई गर्नुभएको बैंकको बारेमा तपाईँलाई केके थाहा छ ? स्थापना, वित्तीय अवस्था, शाखा संजाल, अध्यक्ष, सीईओ लगायत साथै बैंकले प्रदान गर्ने सेवा, व्याजदर लगायतका विषयमा जानकारी लिनुहोस् ।
कहाँबाट लिने त जानकारी ?
बैंकमा जागीर खानको लागि बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै कुराको जानकारी चाहिन्छ । यस्ता जानकारीहरु समावेश गरिएका पुस्तकहरु बजारमा पाइन्छन् । पुस्तकमा नपाइएका कुराहरु नेपाल राष्ट्र बैंकको वेभसाइटमा पाइन्छ । समसामयिक जानकारीका लागि समाचार हेर्नुपर्छ । बैंक सम्बन्धी जानकारीका लागि बैंकको वेभसाइट हेर्न सक्नुहुन्छ ।
सबै जानकारी लिएर मात्र हुँदैन, आफूमा विश्लेषण गर्ने क्षमता पनि विकास गर्नुपर्छ । नेपालमा बैंक हुँदा र नहुँदाका फरक, प्रविधिको प्रयोगले ल्याएका सुविधा, बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएका कमजोरी, सुधार गर्नुपर्ने कुराहरु लगायतका विषयमा विश्लेषणात्मक जवाफ दिन सक्ने क्षमता आफूमा विकास गर्नुभयो भने तपाईँले बैंकिङ परीक्षामा राम्रो गर्न सक्नुहुन्छ ।
यो पनि अध्ययन गर्नुहोस्
गभर्नर छनौट : विधि र प्रकृया (राष्ट्र बैंक ऐनले तोकेका गभर्नरका अधिकारसहित)
नागरिक उड्‍डयन प्राधिकरणको बजेट ४१ अर्ब ११ करोड
सहकारी अनुगमन निर्देशिका जारी
उद्योगीलाई बिमा शुल्कमा छुट